Ny tantaran’ny Haggadah-n’i Sarajevo, ilay boky jiosy tamin’ny vanim-potoana teo antenantenany izay tafavoaka velona tamin’ny fitsarana katôlika, ny famonoana tambabe ary ny ady tao Yogoslavia. · Global Voices teny Malagasy
Ny tantaran'ny Haggadah-n'i Sarajevo, ilay boky jiosy tamin’ny vanim-potoana teo antenantenany izay tafavoaka velona tamin'ny fitsarana katôlika, ny famonoana tambabe ary ny ady tao Yogoslavia.
Manana "nafaka Bosniaka' (vintana tsy ampoizina) ity
Voadika ny 16 Janoary 2021 16:25 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Română , Español, русский, Ελληνικά, Esperanto , polski, Français, Shqip, English
Lea Maestro, tovovavy jiosy Bosniaka mijoro aorian'ny Haggadah ao amin'ny Tranombakoka Nasionalin'i Bosnia sy Herzegovina. Sary nalain'i Midhat Poturović /Tetezamita, nahazoana alàlana.
Navoaka voalohany tao amin'ny ”Balkan Diskurs”, tetikasan'ny Ivotoerana Fikarohana aorian'ny ady (Post-Conflict Research Center) ity tantara nataon'i Adelisa Mašić ity. Dika iray nokiraina no naverin'ny Global Voices navoaka indray ho ampahany amin'ny fifanarahana iray fifampizarana votoaty.
Nandritra ny 100 taona mahery, ary nandritra ny tantara nisavorovoron'i Bosnia dia narovan'ny mponin'i Sarajevo ny Haggadah-n'i Sarajevoo, izay fitambarana soratra misy fitsipika sy fombandrazana jiosy. Any amin’ny tranombakoka Nasionalin'i Bosnia sy Herzegovina no misy azy io, izay toerana im-betsaka voatery nilaozan'ny Haggadah mba hiarovana azy.
Fanangonana an-tsoratra ny Haggadah, izay mirakitra ny fitsipika ara-pivavahana sy ny fombandrazana ampiasaina hamarihana ny Paska; fety izay mankalaza ny fanafahana ny vahoaka jiosy tamin'ny fanandevozana egyptiana. Mandritra ny Paska, mamaky ny Haggadah amin'ny fomba nentim-paharazana ny fianakaviana jiosy, izay midika fa misy marobe ny boky tahaka ireo. Ny ”Haggadah-n'i Sarajevo” angamba no anisan'ny malaza indrindra amin'izy ireny.
Ny tranombakok'i Bosnia sy Herzegovina dia nanamarika fa tany Barcelona, tamin'ny taona 1350 ny Haggadah-n'i Sarajevo, no nosoratana. Noho ny fanenjehana ny Jiosy tany Espaina dia nentina nitety an'i Italia izy tamin'ny taonjato faha-16 sy faha-17, araka ny fanamarihana voatanisa ao amin'ireo pejiny, talohan'ny nahatongavany tany Bosnia sy Herzegovina tamin’ny fotoana tsy voafaritra talohan'ny faran'ny taonjato faha-19.
Mirakitra sary an'ohatra tsy manam-paharoa ny Haggadah-n'i Sarajevo ary izy irery no Haggadah avy tamin'izany fotoana izany ka mbola voatahiry manontolo.
“Ny fianakaviana Sephardic Cohen avy any Sarajevo, noho ny olana ara-bola, dia nanapa-kevitra ny hivarotra ny Haggadah-ndry zareo. Tamin'ny voalohany dia natolotr'izy ireo tamin'ireo fikambanan'ny jiosy isan-karazany izany, saingy tsy nisy olona nahazaka ny vidiny. Satria ny governemanta Aostraliàna-Hongroà no namatsy vola ny Tranombakoka Nasiônaly, izy no nanana vola ampy hanavotana azy io, ka tamin'ny 1894 dia novidiany ny Haggadah, tamin'ny sanda 150 crowns. Mbola anananay ao anatin’ny antotan-taratasinay ny fifanarahana fifampivarotana, ” hoy ny mpitantana Lejla Bečar.
Avy eo nalefa avy any Sarajevo io Haggadah io ho any Viena, mba ho fakafakaina ary naverina tany Bosina sy Herzegovina, niaraka tamin'ny fanovaovàna isan-karazany, afaka taona vitsivitsy.
Avy eo, tamin'ny 1941, dia nibodo an'i Bosnia sy Herzegovina i Alemaina Nazia, nampian'ny fitondrana saribakoly napetraky ny Nazia tao Kroasia, izy ireo no nanao ny Famonoana Tambabe ny Jiosy tany Bosnia. Nandritra ny efatra taona manaraka, 10 000 Jiosy no maty tany Bosnia tamin'ny olona 14.000. Nanazava ny zava-nitranga nandritra io fotoana io nanjo ilay boky sarobidy i Bečar :
Lejla Bečar. Sary nalain'i Mustafa Öztürk. Nahazoana alàlana.
Nanangona zavakanto jiosy nanerana an'i Eropa ny tafika alemàna mba hamoronana tranombakoka iray ho an'ny sivilizasiôna very. Tian'ny Sarajevo manokana ny Haggadag. Ny mpitahiry Derviš Korkut – lehilahy manam-pahaizana – no tompon'andraikitra tamin'izany. Rehefa nampandre azy i Joza Petrović, talen'ny tranombakoka tamin'izany fotoana izany, fa tonga ny Alemàna dia nafeniny tao anaty pataloha ny Haggadah ary nolazain'izy ireo fa natolotr'izy ireo taminà manamboninahitra iray vao io maraina io ilay izy. Nanainga ny Alemàna hitady io manamboninahitra io, izay noforonina tao an-tsain'i Derviš sy Joza fotsiny, raha ny roa tamin-dry zareo nijanona nandinika izay ho ataony amin'ilay Haggadah.
Tanaty fankaharan-doza goavana, nafenin'i Korkut tao amin'ny maoske iray tao amin'ny tanàna silamo tao Bjelašnica Mountain ny Haggadah-n'i Sarajevo , ary najanona tany hatramin'ny faran'ny Ady Lehibe Faharoa ilay izy. Taorian'izay no namerenana azy tao amin'ny Tranombakoka Nasionaly tany Sarajevo.
Notandindonin-doza indray ny Haggadah-n'i Sarajevo nandritra ny fahirano nahazo an’i Sarajevo (1992-1996). Ny tranombakoka Nasionaly dia tena teo amin'ny laharana voalohany nisian’ny ady ary nitaty fahasimbana henjana. Niaraka tamin'ireo entana sarobidy maro hafa, nafindra tao amin'ny tranombokin'ny Banky Nasionaly ny Haggadah, ary nijanona tao hatramin'ny faran'ny Ady tao Bosnia.
Pejy avy amin'ny tantara iray nisamboaravoara. Sary avy amin'nyTranombakoka Nasionalin'i Bosnia sy Herzegovina. Nahazoana alàlana.
Tafavoaka velona tamin'ny fitsarana katôlika, tamin’ny ady lehibe roa nifanesy ary ny ady tany Bosnia sy Herzegovina ny Haggadah-n'i Sarajevo. “Manana ‘’nafaka’’ (vintana tsy nampoizina) Bosniaka izy”, hoy ny fihiakan'i Bečar. Ho an'i Luka Bošković, mpilatsaka an-tsitrapo efa hatry ny ela tao amin'ny Traombakona Nasiônaly, na dia manandanja aza ny haren'ny kolontsain'i Bosnia sy Herzegovina, dia tsy mahalala ny maha-zava-dehibe ny Haggadah ireo andian-taranaka tanora.
Tamin'ny andron'ny tsingerintaonan’ny tranombakoka sy ny Alin’ny Tranombakoka Eoropeana dia ireo namana efa hita foana ihany no indraindray mahavita mitondra olon-kafa. Tsy tia mandeha any amin'ny tranombakoka ny tanora,” hoy izy.
Toy izao manaraka izao ny toroheviny ho an'ny tanora: “Rehefa mitsidika ny tranombakoka nasionaly ianao dia jereo tsara ireo fampirantiana, vakio ireo soratra ary apetraho amin'ny media sôsialy izay voavakianao sy nianaranao nandritra ity fitsidihana ity. Aza maika mihitsy amin’ireo zavatra ireo, toy ny fahazarana manao izany amin'ny fiainantsika rehetra”.
Dobro nam dosli #zemaljskimuzejbih #sarajevohaggadah #sarajevskahagada pic.twitter.com/7Ia6WEaBlE — Zemaljski muzej BiH (@Zemaljskimuzej) June 2, 2020
Manomboka anio ny Haggadah-n'i Sarajevo dia azo atolotra indray ho an'ireo mpitsidika mandritra ireo fotoana mahazatra isaky ny Talata sy Alakamisy, manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 1:00 tolakandro, ary koa isaky ny Sabotsy voalohany isambolana mandritra io ora io ihany.
Iray amin'ireo sombin-javatra sarobidy indrindra sy tsy manam-paharoa ao anatin'ny fantin'ny Tranombakoka Nasionalin'i Bosnia sy Herzegovina ny Haggadah-n'i Sarajevo, talohan'ny taona 2018 izy io dia tsy naseho ampahibemaso raha tsy amin'ny fotoana tena voatokana – matetika amin'ny Paska sy ny tsingerintaonan'y tranombakoka – noho ny tsy fisian'ny fepetra mifanaraka tsara tamin'izany.
Noho ny famatsiambola avy amin'ny masoivoho frantsay any Bosnia-Herzegovina sy ny UNESCO, aranty indroa isankerinandro ny Haggadah izao; ny Talata sy ny Alakamisy manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 1 ora, azo tsidihina ihany koa izy ny Sabotsy voalohany amin'ny volana mandritra ireo ora nomena ireo ihany. Ankoatran'izay, manolotra fitsidihana manokana miaraka amin'ireo manam-pahaizana manokana ny tranombakoka.